Xildhibaanada Mowshinka ka wada Jawaari oo kulan yeeshay – Daily Som
Xildhibaanada Golaha shacabka ee Moowshinka ka wada Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa Maanta kulan ku yeeshay Xarunta Vila Hargaysa ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Cabdulahi sheekh Ismaaciil oo ka mid ah Xildhibaanada sida ayn uga soo horjeeda Gudoomiye Jawaari ayaa sheegay in mowshinka ay ka keenee Afhayeenka Baarlamaanka uu yahay Mid sharci ah isla markaana aysan jirin Cid is hortaag ku samayn karta.
waxa uuna ugu baaqay inta uu jiid jiid galin lahaa dalka in uu xilka iskaga Dago maadaamu uu ku yiqiin ni wadani ah sida uu hadalka udhigay xildhibaanka.
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyihii hore ee Baarlamaankaii TFG shiikh aadan Maxamed Nuur shiikh aadan Madoobe, ayaa isigana ugu baaay in uu baneeypo kursiga, banaankane ka istaago, waxa uuna Cadeeyay in Gudoomiyaha ay la gudbon tahay in uu sugo Codka uu kalsoonida ku wayn karo ee 184 xildhibaan ama uu is casilo.
waxa uuna beenyaya sheekh aadan madoobe in aysan jirin wax Ciidan ah la wareegay Xarunta Baarlamaanka, waxa uuna ku tilmaamayu Dacaayad ay faafiyeen Xildhibaano Saaxiib la ah Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Xildhibaanada Mowshinka ka wada Jawaari oo kulan yeeshay added by Staff on March 17, 2018